ခင်ပွန်းဖြစ်သူသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလာသူတွေကြောင့် နာကျင်ရလို့စာနာပေးဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန် – Cele Posts
ခင်ပွန်းဖြစ်သူသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလာသူတွေကြောင့် နာကျင်ရလို့စာနာပေးဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန်
တတိယလှိုင်း အနေနဲ့ တစ်ကျော့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးက အရင်ထက် ပြင်းထန်တာကြောင့် သေဆုံးကြသူ တွေလည်း မနည်းခဲ့ပါဘူး ။ ကိုယ်ချစ်ခင်ရသူတိုင်းကို မထင်မှတ်ထားဘဲ ဆုံးရှုံးကြရလို့ ပူဆွေးသောက ရောက်ကြရပါတယ် ။
မကြာခင်ကဆိုရင်လည်း အဆိုတော် ရွှေရည်သိန်းတန်ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ သူမ အနေနဲ့လည်း ဒီလို အ​ခြေအနေတွေမှာ များစွာပူဆွေးသောကရောက်နေခဲ့ပါတယ် ။
အခုလည်း သူမခင်ပွန်းရဲ့ နာရေးကို သတင်းလာရောက်မေးကြတဲ့ အပေါ်မှာ ရင်နှင့်အမျှခံစားနေရချိန်မို့ နားလည်ပေးကြဖို့ကို “ကျွန်မသူများနာ​ရေးသတင်း​မေးရင်..ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆုံးတာလည်းလို့..တခါမှမ​မေးဖူးခဲ့ပါဘူး..တခါရှင်းပြရတိုင်းအကြိမ်ကြိမ်နာကျင်ရတဲ့.ကျန်ရစ်သူရင်ထဲကဆုံးရှုံးမှုကိုစာနာလို့ပါ..ကျွန်မကိုလည်း..စာနာ​ပေးရင်သိပ်​ကောင်းမှာပဲလို့လည်း​တောင့်တမိတယ်..သူ..ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး..ချစ်လွန်းလို့ကျွန်မသဝန်တိုရမစိုးလို့..နှလုံးသားထဲအ​ရောက်​သေး​သေး​လေးချုံ့ထည့်ထားလိုက်တာပါ…ရင်ဘတ်ကိုခွဲထည့်ရတာမို့..နာကျင်မှုကတော့သွေးပျက်မတတ်ပေါ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. သူကျွန်မနှင့်အတူရှိ​နေပါတယ်..” ရေးသာစဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
Photo – Shwe Yee Thein Tan
ခငျပှနျးဖွဈသူသဆေုံးမှုနဲ့ပတျသကျပွီးမေးလာသူတှကွေောငျ့ နာကငျြရလို့စာနာပေးဖို့ တောငျးဆိုလာတဲ့ ရှရေညျသိနျးတနျ
တတိယလှိုငျး အနနေဲ့ တဈကြော့ ပွနျလညျရောကျရှိ လာတဲ့ ကိုဗဈရောဂါကပျဆိုးကွီးက အရငျထကျ ပွငျးထနျတာကွောငျ့ သဆေုံးကွသူ တှလေညျး မနညျးခဲ့ပါဘူး ။ ကိုယျခဈြခငျရသူတိုငျးကို မထငျမှတျထားဘဲ ဆုံးရှုံးကွရလို့ ပူဆှေးသောက ရောကျကွရပါတယျ ။
မကွာခငျကဆိုရငျလညျး အဆိုတျော ရှရေညျသိနျးတနျရဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူဟာကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ ရုတျတရကျ ကှယျလှနျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ သူမ အနနေဲ့လညျး ဒီလို အ​ခွအေနတှေမှော မြားစှာပူဆှေးသောကရောကျနခေဲ့ပါတယျ ။
အခုလညျး သူမခငျပှနျးရဲ့ နာရေးကို သတငျးလာရောကျမေးကွတဲ့ အပျေါမှာ ရငျနှငျ့အမြှခံစားနရေခြိနျမို့ နားလညျပေးကွဖို့ကို “ကြှနျမသူမြားနာ​ရေးသတငျး​မေးရငျ..ဘယျလိုဖွဈလို့ဆုံးတာလညျးလို့..တခါမှမ​မေးဖူးခဲ့ပါဘူး..တခါရှငျးပွရတိုငျးအကွိမျကွိမျနာကငျြရတဲ့.ကနျြရဈသူရငျထဲကဆုံးရှုံးမှုကိုစာနာလို့ပါ..ကြှနျမကိုလညျး..စာနာ​ပေးရငျသိပျ​ကောငျးမှာပဲလို့လညျး​တောငျ့တမိတယျ..သူ..ဘာမှမဖွဈပါဘူး..ခဈြလှနျးလို့ကြှနျမသဝနျတိုရမစိုးလို့..နှလုံးသားထဲအ​ရောကျ​သေး​သေး​လေးခြုံ့ထညျ့ထားလိုကျတာပါ…ရငျဘတျကိုခှဲထညျ့ရတာမို့..နာကငျြမှုကတော့သှေးပကျြမတတျပေါ့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ. သူကြှနျမနှငျ့အတူရှိ​နပေါတယျ..” ရေးသာစဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
MRTV ထုတ်လွှင့်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရမှုအပေါ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ တေးရေးမြင့်မိုးအောင်
ဒုတိယရင်သွေး သားငယ်လေးကို မွေးဖွားတော့မယ့် ချစ်ဇနီးလေးရယ် သမီးလေးရယ်နဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုပုံလေးတွေကို ပြသလာတဲ့ အာဘွိုင်း